ချီဟိုင် - ဝီကီပီးဒီးယား
၁၉၃၇ ထုတ် ချီဟိုင်အဘိဓာန်
"ချီဟိုင်"(辞海)ကို ၁၉၁၅ တွင်ပုဂ္ဂလိက ကျုံးဟွာ စာအုပ်တိုက် တည်ထောင်သူ လူဖေ့ခွေ ကစတင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ပထမဆုံးအယ်ဒီတာ စူးရှင်းချိန် သည် ၁၉၃၆ ခုနှစ်တွင် အတွဲကြီးနှစ်တွဲကို တရားဝင်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ ၁၉၅၇ စက်တင်ဘာလ လက်ျာဝါဒီများလှုပ်ရှားနေချိန်တွင်၊ မော်စီတုန်း ရှန်ဟိုင်းသို့ လည်ပတ်ခဲ့သည့်အခါ ချီဟိုင်ကို မွမ်းမံ၍ ထုတ်ဝေရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ရာ၊ စူးရှင်းချိန်က အယ်ဒီတာချုပ် လုပ်ရသည်။ ပြီးနောက် ယဉ်ကျေးမှု တော်လှန်ရေး ဖြစ်ပွားရာ၊ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေတည်းဖြတ်မှုခေတ္တရပ်သွားသည်။  ချီဟိုင် ထုတ်ဝေရာတွင် နန်ကျင်းမှ ဟန်ကျိုးသို့ ပြောင်းရွှေ့ရခြင်းနှင့် ပြည်တွင်းစစ်ကို ကြုံခဲ့ရသည့်အပြင်၊ မူကွဲအမျိုးမျိုး ထုတ်ဝေခြင်းကိုလည်း ကြုံခဲ့ရသည်။
"ချီဟိုင်"သည် ဘာသာစကားလုံးကောက်နှင့် စွယ်စုံကျမ်း လုံးကောက်များ စုဆောင်းပေါင်းစပ်ထားသော ပေါင်းစည်းအဘိဓာန် တစုံ ဖြစ်သည်။ သက်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်အဖွဲ့များ အကူအညီဖြင့် ကြပ်မတ်စွာ ပြုစုထား၍ သိကောင်းစရာများနှင့် တိကျမှန်ကန်မှုတွင် အလွန် စိတ်ချရပြီး၊ တရုတ်ပြည်၏ အအားထားရဆုံး ရည်ညွှန်းကျမ်းများထဲမှ တစ်အုပ် ဖြစ်သည်။ အလွယ်ဖြင့် မှတ်ပုံတင်သော ကုမ္ပဏီအမည်ကို လက်မခံ၍ ဟောင်ကောင်ကုမ္ပဏီ၏ အမည်ကို ထိုစာအုပ်တွင် သို့မဟုတ် ၁၇၁၆ ခုနှစ်၏ ခန်းကျိအဘိဓာန်၌သာ ရှာတွေ့မည် ဖြစ်သည်။ ချီဟိုင်ကို လက်ရှိတွင် ရှန်ဟိုင်းအဘိဓာန်ထုတ်ဝေရေးတိုက်မှ တာဝန်ယူ ထုတ်ဝေပြီး၊ ထိုင်ဝမ်တွင် ရိုးရာတရုတ်စာဖြင့် ထုတ်ဝေသည်။ ၁၉၉၉ ခုနှစ်ထုတ် ချီဟိုင်စာအုပ်တွင် တရုတ်စာလုံးပေါင်း ၁၉၄၈၅ လုံး စုဆောင်းထားသည်။ (ထိုထဲတွင် ရိုးရာစာလုံးနှင့် ဆင်တူစာလုံးများ ပါဝင်သည်။)
ချီဟိုင်ကြီးမှာ ချီဟိုင်ကို အခြေခံပြီး အကျယ်ဖြန့်ထားသော ဧရာမအဘိဓာန်စာအုပ်ကြီး ဖြစ်ကာ၊ ၁၉၉၈ ခုနှစ်တွင် တရားဝင် ထုတ်ဝေပြီး၊ ၂၀၀၃ ခုနှစ်မှစ၍ ဆက်တိုက် ထုတ်ဝေသည်၊ ၂၀၁၅ နှစ်ကုန်ထိ ထုတ်ခဲ့သည်။
၄.၁ ချီဟိုင်, Cihai
၄.၂ ဆဋ္ဌမကြိမ်ထုတ် ချီဟိုင်
ချီဟိုင်သည် ဝေါဟာရကို အဓိကအကြောင်းအရာအဖြစ် အသုံးပြုသည်။ ချီဟိုင်သည် အများသုံးဝေါဟာရအပြင် ကြွယ်ဝလှသော အထူးပြုဘာသာရပ် အခေါ်အဝေါ်ဝေါဟာရများကိုပါ စုဆောင်းသည် ဖြစ်ရာ၊ အတွေးအခေါ်, သမိုင်း, ဆေးပညာ, ဥပဒေ, ဓာတုဗေဒ, ဘာသာတရား, သင်္ချာ စသည့် များမြောင်လှသော ဘာသာရပ်များနှင့် နယ်ပယ်အသီးသီးမှ ဝေါဟာရများကို စုဆောင်းထားသည့်အတွက် စွယ်စုံကျမ်းနှင့် တူလှစွာသော ဧရာမအဘိဓာန် ဖြစ်လာသည်။
ချီဟိုင်သည် စကားလုံး တည်ပုဒ်ထားသည့်အတွက် လုံးကောက်အဘိဓာန် အနေနှင့်လည်းကောင်း၊ ဝေါဟာရအဘိဓာန် အနေနှင့်ပါ အသုံးကျသည်။
"မြစ်စင်းတရာ ပင်လယ်ထဲ စီးဝင်သည်"ဆိုသော တရုတ်စကားပုံကို မှီး၍ ချီဟိုင်ဟု မှည့်သော ကျုံးဟွာစာအုပ်တိုက်၏ တာဝန်ခံ လူဖေ့ခွေသည် ၁၉၁၅ တွင် စတင် လှုပ်ရှားခဲ့ပြီး၊ ကုန်သွယ်ရေးစာအုပ်တိုက်မှ ထုတ်သော "ချီယွင်"အဘိဓာန်နှင့် ယှဉ်ပြိုင်နေရသည်။
၁၉၂၉ တွင် ကျုံးဟွာစာအုပ်တိုက် ချီဟိုင်ပြုစုရေးအဖွဲ့သည် နန်ကျင်းမှ ဟန်ကျိုးသို့ ပြောင်းရွှေ့သည်  ။
ကြာရှည်ရင်းနှီးရပြီး၊ အကျိုးအမြတ် မရရှိသောကြောင့်၊ အကြိမ်များစွာ လုပ်ငန်း ရပ်ဆိုင်းရပြီးနောက်၊ လူဖေ့ခွေသည် ဆက်တိုက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပြီး၊ ၁၉၂၈ တွင် စူးရှင်းချိန်ကို အထူးဖိတ်ခေါ်ကာ ချီဟိုင် အယ်ဒီတာအဖြစ် ခန့်အပ်ပြီးနောက်၊ နောက်ဆုံး ၁၉၃၆ တွင် တရားဝင် ထုတ်ဝေလိုက်ရာ၊ တပြည်လုံး အံ့ဩဘနန်း ဖြစ်ကုန်သည်။
တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ ထူထောင်ပြီးနောက် သွေးသစ်လောင်းရေးနှင့် လူတန်းစားတွန်းလှန်ရေးအတွက် လိုအပ်ချက်နှင့် မကိုက်ညီသောကြောင့် ချီဟိုင်ကို တဖန် မွမ်းမံရန် မော်စီတုန်းက တောင်းဆိုသည် ။
၁၉၅၇ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလတွင် မော်စီတုန်း သည် ချီဟိုင်အဟောင်းကို ပြုပြင်ရန် ရှန်ဟိုင်း၌ ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ၁၉၅၈ ခုနှစ်တွင် ကျုံးဟွာစာအုပ်တိုက် ချီဟိုင်ပြုစုရေးအဖွဲ့ကို တည်ထောင်လိုက်ပြီးနောက်၊ ပြင်ဆင်မှုလုပ်ငန်းတွင်ပါဝင်ရန် ကျွမ်းကျင်သူ ၅၀၀၀ ခန့်နှင့် ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ ၁၉၆၁ မှ ၁၉၆၂ နှစ်ဦးထိ ချီဟိုင် အစမ်းကျမ်းကို ထုတ်ဝေသည်၊ ၁၉၆၅ တွင် "အတည်မပြုရသေးသော မူကြမ်း"ကို ပြီးစီးသည်၊ ယဉ်ကျေးမှုတော်လှန်ရေး ကာလအတွင်းတွင် မွမ်းမံတည်းဖြတ်ရေးလုပ်ငန်း မကြာခဏ ရပ်တန့်သွားခဲ့ပြီး၊ တော်လှန်ရေး ပြီးနောက် ပြန်လည် စတင်ရာ၊ ၁၉၇၉ ခုနှစ်တွင် ပထမဦးဆုံးကြိမ် ပြုပြင်မွမ်းမံထားသော ချီဟိုင်ကို တရားဝင် ပြီးမြောက်သည်။
အသွင်ပြောင်းပြီး ပြန်လည်မွေးဖွားလာသော၊ လူတန်းစားတော်လှန်ရေးခေတ်တွင် ထုတ်ဝေသော ဒုတိယကြိမ်ထုတ် ချီဟိုင်တွင် တည်ပုဒ်များနှင့် အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်များသည် နိုင်ငံရေးအရသော်လည်းကောင်း၊ အတွေးအခေါ်နှင့် သဘောတရားပိုင်းတွင်သော်လည်းကောင်း လက်ဝဲဆန်နေပြီး ယဉ်ကျေးမှုတော်လှန်ရေး ပြီးသည့်တိုင် ပြင်ဆင်နိုင်ခြင်း မရှိဘဲ ကျန်နေသည်  ။
ထိုင်ဝမ်ရှိ ကျုံးဟွာစာအုပ်တိုက်မှ လေဖေးဟုန် ပြန်လည်ပြုပြင်ပြီး အသစ်ထုတ်လိုက်သော ချီဟိုင်ကို ထိုင်ဝမ်မူအနေနှင့် ၂၀၀၀ ခုနှစ် ရောက်သော် ဒသမကြိမ်မြောက်ပင် ထုတ်လိုက်ပြီ ဖြစ်သည်  ။
မော်ဝါဒီတဦး ဖြစ်သူ ချိန်စုံလီက ဝေဖန်သည်မှာ ၁၉၉၉ ထုတ် ချီဟိုင်တွင် တန်ပြန်သောင်းကျန်းမှုနှင့် ပတ်သက်သော ဝေါဟာရများတွင် နိုင်ငံရေးအရ မှားယွင်းဖော်ပြမှုများ ရှိနေသည်ဟု ဖြစ်သည် ။
ပညာရှင် လီစုံ့ရှင်းက ဝေဖန်သည်မှာ ဆဋ္ဌမကြိမ်ထုတ် ချီဟိုင်တွင် တိုင်းတာရေးယူနစ်များနှင့် ပတ်သက်ပြီး အရင်ကြိမ်ထုတ်များထက် ပြင်ဆင်ထားသည် မှန်သော်လည်း ပြင်ဆင်ရန် အချက်များ များစွာ ကျန်ရှိနေသေးသည် ဟု၍ ဖြစ်သည် ။
ဗားရှင်း ဖြန့်ချိချိန် စုဆောင်း စကားလုံး စာအုပ်နံပါတ်
ပထမကြိမ်ထုတ် ၁၉၃၆ 82,827 -
ဒုတိယကြိမ်ထုတ် ၁၉၆၅ 97,792 -
တတိယကြိမ်ထုတ် ၁၉၇၉ 127,186 ယူနီဖောင်းစာအုပ်နံပါတ် 17187-27
စတုတ္ထကြိမ်ထုတ် ၁၉၈၉ 123,931 ISBN 9787532600830
ပဉ္စမကြိမ်ထုတ် ၁၉၉၉ 122,835 ISBN 9787532605231
ဆဋ္ဌမကြိမ်ထုတ် ၂၀၀၉ 127,221 ISBN 9787532631056
၁၉၃၆ ထုတ် -ပ-ဒု ၂ တွဲ၊ စူးရှင်းချိန် တည်းဖြတ်သည်။ ၎င်းသည် အကြိမ်များစွာ ပုံနှိပ်ခံရ၊ ၁၉၈၁ ဇန်နဝါရီတွင် ကျုံးဟွာစာအုပ်တိုက်မှ ကြိမ်ဖန်များစွာ ပုံနှိပ်ခဲ့သည်။
၁၉၄၇ ထုတ် - တစ်တွဲတည်း၊ ဟောင်ကောင် ကျုံးဟွာစာအုပ်တိုက်သည် ၁၉၈၃ ခုနှစ်တွင်ပြန်လည်ပုံနှိပ်ခဲ့သည်။ ISBN 978-962-231-005-6
၁၉၆၁ ထုတ် - ၁၉၆၁ မှ ၁၉၆၂ အစောပိုင်းအထိထုတ်ဝေခဲ့သော ချီဟိုင်၏ စမ်းသပ်စာအုပ်။ ဘာသာရပ်စနစ်ဖြင့် ၁၆ တွဲခွဲထား။
၁၉၆၅ ထုတ် - ချီဟိုင် အတည်မပြုသေးသော မူကြမ်း၊ အတွင်းပိုင်း၌သာ ဖြန့်ချိ၊ ပ/ဒု ၂ တွဲခွဲ။
၁၉၇၉ ထုတ် - ရှန်ဟိုင်းအဘိဓာန်ထုတ်ဝေရေးမှ ထုတ်ဝေသည်။ သုံးတွဲပါ၊ အထူးပြုဘာသာရပ် ၂၆ ခုရှိ။ ၁၉၈၀ ခုနှစ်တွင် အသေးစား ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ ၁၉၈၃ ခုနှစ် ထုတ်ဝေမှုတွင် စကားလုံးအသစ်များနှင့် စွယ်စုံကျမ်းဆောင်းပါးများ ပါဝင်သည်။ အယ်ဒီတာများမှာ စူးရှင်းချိန် ၊ ချိန်ဝမ့်တောက်နှင့် ရှကျိန်းနုံ ဖြစ်။
၁၉၇၉ ခုနှစ်တွင် ထုတ်ဝေခဲ့သော ချီဟိုင်တွင်စာလုံးပေါင်း ၁၄၈၇၂ လုံး၊ စကားလုံး ၉၁၇၀၆ နှင့်သရုပ်ဖော်ပုံ ၃၀၀၀ ကျော် ပါဝင်သည်။ ရရှိသောစကားလုံးများကို တရုတ်စာလုံး ဆွဲချက်အလိုက် ခွဲထုတ် စီစဉ်သည်။
၁၉၈၉ ထုတ် - ၁၉၇၉ ထုတ်နှင့် အတူတူပင် ဖြစ်ပြီး စွယ်စုံကျမ်းဝင်စကားလုံးများကို ခွဲခြားသည့် မာတိကာ တစ်စောင် ထည့်ခဲ့သည်။
၁၉၈၉ ထုတ် ချီဟိုင်တွင် ပါဝင်သော စာလုံးပေါင်း ၁၆,၅၃၄ လုံး၊ အသုံးများသော စကားလုံးများနှင့် စွယ်စုံကျမ်းလာ စကားလုံးပေါင်း ၁၀၃၀၀၀ ကျော်ရှိသည်။ စာအုပ် တအုပ်လုံးတွင် စာလုံးရေ ၁၆ သန်းကျော်ရှိသည်။ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ အုပ်ချုပ်ရေးဌာနအလွယ်ဇယားနှင့် တရုတ်စာလုံး ထောင့်လေးထောင့်နှင့် ရှာဖွေနည်း ရည်ညွှန်းနှင့်တည်ပုဒ်ပြင်ပစာသား ရှာဖွေခြင်း ရည်ညွှန်းကိုထည့်သွင်းခဲ့သည်။
၁၉၈၉ ခုနှစ်ထုတ် ချီဟိုင်မှထုတ်ဝေသောစကားလုံးများသည် စွယ်စုံကျမ်းလာ စကားလုံးများအပေါ် ပိုမိုအာရုံစိုက်သည်။
၁၉၉၉ ထုတ် - ဗားရှင်းမျိုးစုံရှိ၊ ရောင်စုံပုံများ ထပ်ထည့်ပြီး အသံထွက်အလိုက်စီထားသော ဗားရှင်းလည်း ရှိ၊ ၂၀၀၃ တွင် သိမ်းဆည်းရမည့် စီးရီးကို ထုတ်ဝေ။ တည်းဖြတ် ရှကျိန်းနုံ ဖြစ်  ။
ဗားရှင်းအားလုံး၏ စာသားနှင့် အကြောင်းအရာသည် တူညီပြီး၊ ကွဲပြားမှုမှာ ရုပ်ပုံ အထားအသိုနှင့် တည်ပုဒ်အစီအစဉ်ဖြစ်ပါသည်၊ ရောင်စုံစာအုပ်တွင်ကာလာဓာတ်ပုံများကို အသုံးပြုသည်။ အခြားစာအုပ်များတွင် ဖြူမည်းမျဉ်းဆွဲ သရုပ်ဖော်ပုံကို အသုံးပြုသည်။ အသံစဉ်ဗားရှင်းတွင် တရုတ်အသံထွက်အလိုက် စကားလုံးစီစဉ်ထားရာ ချီဟိုင်စာအုပ်များအနက် ပထမဦးဆုံး ဖြစ်သည်။
၁၉၉၉ ထုတ် ချီဟိုင်တွင်စာလုံးပေါင်း ၁၉,၄၈၅ ခု (ရိုးရာစာလုံးများနှင့် မူကွဲစာလုံးများ) ပါဝင်သည်၊ ၎င်းအနက် ၁၇,၆၇၄ သည် တည်ပုဒ်များအဖြစ်စာရင်းဝင်ခဲ့သည်။ တည်ပုဒ်နှင့် သီးခြားဝေါဟာရများမှာ ၁၂၂၈၃၅ လုံး၊ စာအုပ်တစ်အုပ်လုံးတွင် စာလုံးပေါင်း ၁၉၈၃၀၀၀၀ ရှိသည်။
ပုံမှန်စာအုပ် : ၃ တွဲ။
ချုံ့စာအုပ်: ၁ တွဲ။
ရောင်စုံစာအုပ် - အတွဲ ၅ တွဲ (နောက်ဆက်တွဲရည်ညွှန်းကျမ်း ပါ) ။
ရောင်စုံပုံချည်း သိမ်းဆည်းရန်စာအုပ် - အတွဲ ၉ တွဲ၊ ချီဟိုင် အယ်ဒီတာ ရှကျိန်းနုံ ကိုယ်တိုင်လက်မှတ်ထိုးထားသည့် ရွှေသတ္တုပါးအမှတ်တရကဒ်ဖြင့် အရောင်အပြည့် ပုံနှိပ်ခြင်း။
ရောင်စုံချုံ့စာအုပ် (sequence): စုစုပေါင်း ၅ တွဲ။
ပုံမှန်ဆိုက်စာအုပ် (အသံထွက်စီ): ၄ တွဲ။
ပြန်လည်ထုတ်ဝေ (sequence): 2002 ခုနှစ်တွင်ထုတ်ဝေ၊ ၁ တွဲ။ လုံးကောက်တည်ပုဒ် အရေအတွက်မှာ ၁၇,၅၂၃ ခု၊ ရိုးရာနှင့်မူကွဲအလုံးရေ ၆၁၂၉ လုံး၊ စာလုံးပေါင်း ၁၀၅,၄၀၀ နှင့် တအုပ်လုံး စာလုံးရေ ၁၈.၈၂ သန်းရှိသည်။
ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေစုဆောင်းမှု (sequence): စုစုပေါင်း ၄ တွဲ။ ၂၀၀၃ ခုနှစ်တွင်ထုတ်ဝေခဲ့ပြီး စုစုပေါင်းစကားလုံး ၁၇.၀၈ သန်း၊ ဖြူမဲမျဉ်းဆွဲပုံပေါင်း ၃,၆၀၀ ကျော်ရှိသည်။
၂၀၀၉ ထုတ် - ၂၀၀၉ စက်တင်ဘာ ၂၁ ရက်တွင်ထုတ်ဝေသည်၊ ၂၀၀၉ ထုတ် ချီဟိုင်ကို ရှကျိန်းနုံနှင့် ချိန်ကျိလိတို့မှ အဓိက တည်းဖြတ်သည်။ ၎င်း၏နယ်ပယ်သည် ပဉ္စမကြိမ်ထက် အနည်းငယ် ပိုမိုမြင့်မားသည်။ စုစုပေါင်း စာလုံးရေမှာ ၂၂ သန်းမျှသော စာလုံးများ ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ၁၉၉၉ ခုနှစ်တွင် ပဉ္စမထုတ်ဝေမှုထက် ၁၀ ရာခိုင်နှုန်း ပိုမိုမြင့်မားသည်။ တည်ပုဒ် တသောင်း ထပ်တိုးသည်၊ အပြောင်းအလဲသည် စာအုပ်၏ သုံးပုံတစ်ပုံကျော်မျှ ရှိပြီး တည်ပုဒ် ၇၀၀၀ ခန့်ကို ဖျက်ပစ်ခဲ့သည်။
တည်ပုဒ်သစ်များမှ လွဲ၍၊ နဂိုတည်ပုဒ်များတွင် များပြားလှသော ပြန်ညွှန်းများ၊ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုရှင်းပြချက်သစ်များ၊ အခြေအနေသစ်များ၊ သတ်မှတ်ချက်သစ်များ၊ ကိန်းဂဏန်းသစ်များကို ထည့်သွင်းသည်။ ပျောက်ဆုံးနေသောစကားများ၊ အသံများ၊ အဓိပ္ပါယ်များနှင့် အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူမှုများ၊ ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ပစ္စည်းများ၊ စကားလုံးများ၊ သင်္ကေတများစသည့် အမှားအယွင်းများနှင့် မလိုအပ်သောစကားလုံးများ၊ မသင့်လျော်သော အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူမှုများကို ပြင်ဆင်ရန် ကျန်ရှိနေသေးသည် ဖြစ်သည် ။
ဆဋ္ဌမကြိမ်ထုတ် (၂၀၀၉)သည် ရောင်စုံအဘိဓာန် ဖြစ်ပြီး နိုင်ငံတကာ စံချိန်စံညွှန်းအရ ၁၆ ချိုးဖြင့် ငါးတွဲ(စာကိုယ်အတွက် ၄ တွဲ၊ ကျမ်းညွှန်းအတွက် ၁ တွဲ)။ စာအုပ်တွင် စာလုံးရေ ၂၂ သန်းခန့်ရှိပြီး တည်ပုဒ်ပေါင်း ၁၂၇၀၀၀ ခန့်ရှိသည်။ အသံထွက်အလိုက် စီသည်။ စာအုပ်ထဲတွင် ရောင်စုံပုံပေါင်း ၁၈၀၀၀ ကျော် (၁၉၉၉ ခုနှစ်ထက် ရုပ်ပုံ ၂၀၀၀ ကျော်နှင့် အမှန်တကယ်ပုံပေါင်း ၅၀၀ ကျော်ဖြည့်စွက်ထားသည်)၊ အများစုမှာ အရောင်ရုပ်ပုံများ၊ ဓာတ်ပုံများနှင့် စာသားများ၊ ရောင်စုံများဖြစ် သည်။
ဆဋ္ဌမကြိမ်ထုတ် ချီဟိုင်သည် ရှေးခေတ် တရုတ်စာလုံးများကို စုဆောင်းသည်ကို ဖောက်ထွက်ပြီး၊ မျက်မှောက်ခေတ် အများသုံး တရုတ်စာ ၅၀၀၀ ကျော်ကို ထပ်မံစုစည်းရာ၊ အဓိပ္ပာယ်အရ ပြောလျှင်၊ အလုံးရေ ၂၀၀၀၀ တိုးမြှင့်စုစည်းခြင်း ဖြစ်သည်။
တရုတ်အက္ခရာများ၊ အသံထွက်ကူးယူချက်များ၊ အထူးပုံသဏ္ဌာန်စကားလုံးသတ်မှတ်ချက်များ၊ ဒီဂျစ်တယ်အသုံးပြုမှု၊ အရေအတွက်နှင့် ယူနစ်များနှင့်သိပ္ပံနည်းကျနှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာ အသုံးအနှုန်းများကိုလည်း အမျိုးသားယူနီဖောင်းစည်းမျဉ်းများနှင့်အညီ ကိုင်တွယ်သည်။
တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံမှ ထိုင်ဝမ်သို့ ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သော ကျုံးဟွာစာအုပ်တိုက် (ထိုင်ဝမ်ကျုံးဟွာစာအုပ်တိုက်) သည် ၁၉၅၆ ခုနှစ်တွင် "ချီဟိုင်" အတွဲ ၂ ခုကိုလည်းထုတ်ဝေခဲ့သည်။ ထိုင်ဝမ် ကျုံးဟွာစာအုပ်တိုက် ချီဟိုင်ပြုစုရေးကော်မတီသည် "ချီဟိုင်၏ နောက်ဆုံးမူကွဲ" (၈ ကြိမ်မြောက်) ကို ထုတ်ဝေခဲ့သည်။
ချီဟိုင်ကြီး(Da Ci Hai)၏နယ်ပယ်သည် ချီဟိုင်ထက် ၂.၅ ဆပိုမိုများပြားသည်။ တစ်အုပ်လုံးတွင် စာလုံးရေသန်း ၅၀ ခန့်ရှိသည်။ ဝေါဟာရများ၊ အတွေးအခေါ်၊ ဘာသာတရား၊ စိတ်ပညာ၊ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ၊ ဥပဒေ၊ စစ်ရေး၊ စီးပွားရေး၊ စီမံခန့်ခွဲမှု၊ လူမျိုး၊ ရှေးတရုတ်သမိုင်း၊ ခေတ်သစ်တရုတ်သမိုင်း၊ ကမ္ဘာ့သမိုင်း၊ တရုတ်ပထဝီဝင်၊ ကမ္ဘာ့ပထဝီဝင်၊ တရုတ်စာပေ၊ နိုင်ငံခြားစာပေ၊ အနုပညာ၊ ဆိုကရေးတီး၊ ပြဇာတ်၊ ပညာရေး၊ အားကစား၊ ဘာသာဗေဒ၊ ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာစာနယ်ဇင်းပညာ၊ သင်္ချာနှင့်ရူပဗေဒ၊ နက္ခတ္တဗေဒ၊ မြေကမ္ဘာသိပ္ပံ၊ အာယုဗေဒ၊ စိုက်ပျိုးရေးသိပ္ပံ၊ ဆေးသိပ္ပံ၊ စက်မှုနှင့်လျှပ်စစ်၊ ဓာတုဗေဒ နှင့် ရက်ကန်း၊ အဆောက်အဦနှင့် ရေကြောင်း၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်သိပ္ပံ၊ စွမ်းအင်သိပ္ပံ၊ ရင်းမြစ်သိပ္ပံနှင့် သတင်းသိပ္ပံ စသည့် ကဏ္ဍခွဲ ၃၈ ခုရှိသည်။ ၎င်းတွင် တည်ပုဒ်၂၈၀,၀၀၀ နှင့် ဓာတ်ပုံ ၈၀၀၀ ပါဝင်သည်။ ၎င်းသည် တရုတ်နိုင်ငံ၏ နိုင်ငံရေး, စီးပွားရေး, ယဉ်ကျေးမှု, သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာတို့၏ နယ်ပယ်သမိုင်း၊ လက်ရှိအခြေအနေနှင့် ဗဟုသုတတို့ကို ရောင်ပြန်ဟပ် ဖော်ပြရုံသာမကဘဲ၊ သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာ၏ လျင်မြန်စွာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ မျက်နှာစာသစ်ကို ဖေါ်ပြခြင်း၊ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ နိုင်ငံပေါင်းစုံ၏ အသိပညာနှင့် သတင်းအချက်အလက်ကိုပါ သိရှိစေသည် ။ ချီဟိုင်ကြီးသည် ၁၀ နှစ်မြောက်ငါးနှစ်စီမံကိန်း၊ ၁၁ နှစ်ငါးနှစ်စီမံကိန်းနှင့် ၁၂ နှစ်မြောက်ငါးနှစ်စီမံကိန်း၏ အမျိုးသားအဓိကစာအုပ်ထုတ်ဝေရေးအစီအစဉ်တွင် ပါဝင်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည် ၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင် နိုင်ငံတော်ပုံနှိပ်နှင့် ထုတ်ဝေရေး အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့မှ ငွေကြေးထောက်ပံ့ပြီး ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင်အမျိုးသားထုတ်ဝေရေးမှ ရန်ပုံငွေ ထောက်ပံ့ခဲ့သည်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလတွင် အမျိုးသားပုံနှိပ်ထုတ်ဝေရေး ရန်ပုံငွေစီမံကိန်းနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုရုံးသည် ချီဟိုင်ကြီးကို ထောက်ခံအားပေးခဲ့ပြီး၊ ထူးချွန်(၉၁ မှတ်)ဟု အကဲဖြတ်ပေးခဲ့သည်။ 
↑ 王炳根 (1 November 2014). 玫瑰的盛開與凋謝 冰心與吳文藻（一九五一～一九九九）. 獨立作家, 120–. ISBN 978-986-5729-42-4။
↑ 方韶毅 (1 July 2011). 民國文化隱者錄. 獨立作家－秀威出版, 231–. ISBN 978-986-221-758-0။
↑ 智效民 (1 October 2013). 民国那些教育家 (in zh-cn). 四川文艺出版社；Esphere Media (美国艾思传媒), 189. ISBN 978-7-5411-3768-6။ “由於辞海不能適應「思想改造」和「階級鬥爭」的需要，毛澤東要求重新修訂。”
↑ (2010) 中国图书评论 (in zh-cn). 中国图书评论编辑部, 6။ “第二版《辞海》对第一版《辞海》作了脱胎换骨的改造。但是,由于第二版《辞海》是在"以 阶级斗争为纲"的年代出版的,条目的设置和释义受到一定的影响。"文化大革命"结束后,对《辞海》 ... 同时,许多重要问题,特别是思想、政治和理论问题的拨乱反正,还未能 在这一版中得到反映,释文中仍然存有一些"左"的痕迹。 1981 年年初,夏老主持召开 ...”
↑ 《辞海》（1999 年版）။
↑ 历版辞海။ chlb.cishu.com.cn။ 2018-11-10 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ 2000余位学人铸成38卷《大辞海》 (in 中文)။ 新华网။ 2018-10-10 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ 前言။ 2018-10-10 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Da Cihai (အွန်လိုင်းဗားရှင်း)
ထိုင်ဝမ် ကျုံးဟွာစာအုပ်ကုမ္ပဏီလီမိတက် Cihai
ကျုံးဟွာစာအုပ်ကုမ္ပဏီ (Hong Kong) Co., Ltd ။ : Ci Hai (ပေါင်းစပ်)
" ရင်းမြစ် "
" Xinhua Dictionary " နှင့် " Modern Chinese Dictionary "
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ချီဟိုင်&oldid=493352" မှ ရယူရန်
ပြင်ပလင့် သေနေသော ဆောင်းပါးများ since 2018年4月
ဤစာမျက်နှာကို ၂၂ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၉၊ ၀၄:၂၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။